Dunida cunto karinta
Blog loogu talagalay kuwa raba inay si macaan u kariyaan
Dibadda ku kari
Mudo intee le'eg ayay qaadataa 4 rodol si loo kariyo?
Intee in le'eg ayay qaadataa in la kariyo ham 4lb ah oo aan laf lahayn? Ham ku rid saxanka dubista oo leh 1/2 koob oo biyo ah. Ku dabool dabool aluminium ah. Dubo at 325 F ilaa 20 ilaa 30 daqiiqo halkii rodol ilaa diirran. Hadda u adeeg ham ama dhalaal sida soo socota: Ka saar foornada ham. Sidee loo kariyaa 4.4 rodol…
Categories Kale oo waxtar leh
Sidee baad u hubisaa in hilib doofaar la kariyey?
Dhib ma leedahay haddii hilib doofaar aan la karinin? Hilibka doofaarka si degdeg ah ayuu u kariyaa si badbaado leh. Mar haddii ay mugdi tahay waa ammaan in la cuno. Hilibka doofaarka ceeriin lafteedu waa khatar aad u hooseeya, waase haddii si habboon loo daaweeyay. Xitaa haddii aan la karinin, uma badna inaad waxyeelo soo gaarto. Hilibka doofaarka ee dukaanka mar hore ma la kariyey? Markaa…
Ma karin kartaa boerewors barafaysan?
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo kariyo boerewors? Isticmaal qaado oo saliid saytuun ah digsi oo u ogolow boerewors-kaaga inay ku karsadaan kulayl yar. Kuleylka hooseeya wuxuu u ogolaan doonaa boerewors inay si siman u karsadaan iyagoo maroojinaya dhinac kasta. Qiyaastii 10 daqiiqo dhinac kasta waa inay ku filnaataa wadar ahaan 20 daqiiqo. Sidee loo…
Su'aashaada: kee baa ka caafimaad badan la kariyey ama khudrad cayriin?
Ma ka wanaagsan tahay in la cuno khudaarta ceeriin ama la kariyey? Cunista khudaarta ceyriinka ah waxay jidhkaaga siisaa heerarka ugu wanaagsan ee folate-ka iyo fiitamiinnada biyaha milmi kara sida fiitamiin C. … Hase yeeshee nafaqooyinka ku jira khudaarta la kariyey runtii way fududahay in la dheefshiido oo la nuugo. Fiilooyinka jilicsan ee khudaarta la kariyey waxay horseedaa sii deynta fiitamiinnada E…
Sidee bay khudaartu isu beddeshaa marka la kariyo?
Sidee bay khudaarta isu beddelaan marka la kariyo? Sidee cunto karintu u beddeshaa khudaarta? Cunto karinta khudaarta waxay jebisaa gidaarada unugyada dhirta, iyadoo sii daynaysa nafaqo badan oo ku xidhan gidaarada unugyadaas. Khudaarta la kariyey ayaa bixiya antioxidants, oo ay ku jiraan beta-carotene, lutein iyo lycopene, marka loo eego marka ay cayriin. Khudaarta la kariyey ayaa sidoo kale keena macdano badan. Khudaarta miyay lumiyaan nafaqooyinka…
Waxaad waydiisay: Sideed ugu kariyaa Iswidhishka la jarjaray ee microwave-ka?
Intee in le'eg ayay iswidishka ku qaadanaysaa in lagu kariyo microwave? Geli iswiidhishka oo dhan foornada microwave-ka. Deji garaaca ilaa sare iyo microwave 20 daqiiqo. Intee in le'eg ayay qaadataa in la kariyo iswidhishka la jarjaray? Ku rid iswidishka digsi weyn oo daboolan. Buuxi biyo qabow oo ku filan si aad ugu dhawaad ​​​​daboosho jajabyada. …
Intee in le'eg ayaad ku karsan kartaa hilibka doofaarka mashiinka aayar?
Miyaad kari kartaa inaad karisid hilibka doofaarka muddo dheer? Ma karsan kartaa hilibka doofaarka? Way adag tahay in la kariyo goynta garbaha dufanka leh ee marbleed iyo baruurta leh. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay noqon kartaa bush sababtoo ah asiidhyada maraqa ku jira haddii karintu sii socoto wakhti aad u dheer oo ka baxsan wakhtiyada lagu taliyey ee karinta. Iska hubi inaad isha ku hayso hilibka doofaarka…
Miyaad kari kartaa ham hammuun ah 350?
Intee in le'eg ayaad ku karisaa ham spiral at 350? Ku sii kululee foornada ilaa 350 darajo F. Digsi yar oo duban ah, ham siman hoos u dhig. Dabool si dabacsan oo foorno ah oo dubi 45 daqiiqo. Intee in le'eg ayaad ku karisaa ham 350? Ku sii kululee foornada ilaa 350 darajo F. Ka fur hamka oo raaci ...
Su'aashaada: dubista iyo karinta isku mid ma yihiin?
Maxay iskaga mid yihiin karinta iyo dubista? Labaduba waxay u baahan yihiin xirfad iyo aqoon. Labaduba waxay ku baaqayaan goynta, jaridda, qasidda, iyo walaaqidda. Labadooduba waxay abuuri karaan waxyaabo wanaagsan oo la cuno. Laakiin hababka dhabta ah ee karinta iyo dubista inta badan aad ayay u kala duwan yihiin, waa qodob si weyn loo caddeeyey haddii aad akhrido...
Waa maxay sababta aadan u xiran dahabka markaad wax karineyso?
Ma ku karin kartaa dahab? Sida laga soo xigtay Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka ee Idaho "dahabku waxay qarin karaan bakteeriyada keena cudurrada ka dhasha cuntada waxayna adkeyn karaan in gacmaha la dhaqo. … Marka ay cuntada diyaarinayaan, shaqaalaha cuntadu waa in ay ka saaraan saacadaha, faraantiga, jijimooyinka, iyo dhammaan dahabka kale ee gacmaha ama gacmaha.” Waa maxay sababta aadan…
haye! waxaan ahay Samantha Adduunka Culinary-ga waa adduun weyn oo yaab leh oo mideeya. Adduunyadan, waxaan qaadanaa mindi leh fikrado dhalaalaya gacmahayaga si aan ugu karino kuwa aan jecelnahay. Iyo udgoonka suxuunta gaarka ah waxay mararka qaarkood nagu qaadi karaan waqtiyada ugu farxadda badan nolosheenna. Dhammaan kuwa jecel oo raba inay wax karsadaan, Soo dhawaada!
© 2022 Adduunka cuntada